राेजगारी देउ सरकार ! - Everest Dainik - News from Nepal
राेजगारी देउ सरकार !
पूर्व माओवादीका नेता चन्द्र बहादुर थापा नेतृत्वमा युवाहरुलाई भत्ता दिनुपर्ने माग सहित शनिबार राजधानीमा र्याली निकालिएकाे छ । र्यालीमा सहभागीहरुले युवा बेच्न बन्द गर । सरकार, स्वदेशमै काम गरेर खान दे, बेरोजगारीलाई रोजगारः मासिक तलब रू ३० हजार दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस घुस सहित उपन्यायाधिवक्ता पक्राउ
प्रदेश २ का मन्त्री यादवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि